Sidee looga saaraa qufulka la iloobay ee dharka saaran? - CAAFIMAAD PLUS MAG
Adduunyada wax iibsiga ayaa si aad ah isu beddeshay tan iyo markii ay soo ifbaxday dukaamaysiga internetka. Marka, waxaan hadda marin u helnaa dhowr fursadood oo aan ku adeegan karno dukaankeenna. Waxaa jira kuwa ka doorbida jiritaankooda jir ahaaneed gudaha ...
Kaliya 1dii qofba 7 ayaa hela jawaabta saxda ah: meeqa god ayaa ku yaal funaanadan? -…
Ka taxaddar jawaabaha degdegga ah maxaa yeelay xalka su'aashan ayaa inyar ka dhib badan sida ay u muuqato. Ma heli kartaa jawaabta saxda ah? Waa tan sawirka si loo ilaaliyo: Immisa god ayaa ku yaal funaanaddan? -…
Sidee buu u shaqeeyaa goobta shaqada? - Talooyin
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay Janaayo 21, 2021 markay ahayd 15:34 PM by noctambule28. Faransiiska gudaheeda, hadda waxaa jira boqolaal goobo wada shaqeyn ah. Nooc cusub oo urur shaqo ah, oo ...
Cumar Sy: Sheekada jacaylka ee noloshiisa beddeshay - SANTE PLUS MAG
Doorka guusha ee uu ka ciyaaray Intouchables, Chocolat, Samba iyo Jurassic World, Omar Sy wuxuu sheegan karaa inuu yahay xiddig caalami ah. Jacaylka uu u qabo shineemada iyo majaajillada ayaa ku riixay xagga sare ee…
7 cunnooyin caafimaad leh oo hodan ku ah fitamiin D-SANTE PLUS MAG
Faytamiin D, oo sidoo kale loo yaqaan 'calciferol', ayaa ka mid ah waxa loogu yeero fiitamiinnada ku milma baruurta. Tan waxaa soo saari kara maqaarka markii uu u soo baxo qorraxda ama waxay ka imaan kartaa cunnadeenna. Hase yeeshe sida mid ...
Sameynta jacaylku waxay gacan ka geysataa la dagaallanka hargabka iyo ifilada sida ku cad daraasadda - SANTE PLUS MAG
Ka waran haddii galmada ay naga caawin karto la dagaallanka hargabka? Waan ku siinay, fikraddu waxay umuuqataa mid aan caadi ahayn. Laakiin xaqiiqda, maahan wax aan macquul ahayn sida ay umuuqato haddii qofku ku tiirsan yahay indha indheynta cilmi baarayaasha Jaamacadda ...
Gabadhan 5 jirka ah waxay bannayneysaa bangigeeda doofaarka si ay u caawiso saaxiibkeed oo waalidkeed aan lacag haysan ...
In badan oo ka badan inta aan u maleyno inaan ka baran karno casharada nolosha dhabta ah carruurta. Iyo sabab macquul ah, waxay mararka qaar maareeyaan inay muujiyaan deeqsinimo ay dad badan oo qaangaar ahi u halgamaan inay muujiyaan ...
Jilicsanaanta dabiiciga ah. Baro sida timahaaga loogu hagaajiyo si dabiici ah 8-da tilmaamood - CAAFIMAADKA US
Haddii aad leedahay timo aan amar lahayn oo caasi ah, uma baahnid inaad adeegsato daaweyn kiimiko ah oo dhaawici karta. Waxaa jira daaweyn si fudud loo diyaariyo oo lagu nadiifiyo, lagu nafaqeeyo lagana ilaaliyo jabitaanka. Kahor…
Tijaabinta foojignaanta: miyaad ka heli kartaa qaladka sawirkan? - CAAFIMAAD PLUS MAG
Isku dheelitirnaanta waxay go'aan ka gaari kartaa waxyaabo badan oo aan qabanno maalin kasta iyo sida aad u maleyn karto, isku heer maaha qof walba. Runtii way kordhin kartaa laakiin sidoo kale ...
1 2 3 ... 48 soo socda